MW CMC Iyo Xafladii Haroorays - Cakaara News
MW CMC Iyo Xafladii Haroorays
jigjiga( Cakaaranews )Axad 20ka March 2016, Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo ay weheliyaan masuuliyiin kamid ah hogaaminta sare ee xukuumada ayaa saaka ka qaybgalay Xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay oo loogu dabaaldagayay degmada cusub ee waqooyiga jigjiga xarunteeduna tahay Haroorays taasoo kamid ah 25 kii degmo, 2dii MM iyo 2dii Gobol ee dhawaan baarlamaanka DDSI uu ku ansixiyay kalafadhigiisii ugu danbeeyay.
Xafladan ayaa waxaa kasoo qaybgalay dhamaan bulshada qaybaheeda kaladuwan sida dhalinyarada, odayaasha, cuqaasha, waxgaradka, culimo-awdiinka, hooyooyinka iyo waliba qaar kamida kooxaha fanka iyo suugaanta DDSI iyada oo shacabwaynihii kaqaybqaadanayay dabaaldaga xafladan degmada cusub iyo gaadiidkuba ay buux dhaafiyeen wadada laamiga ah ee haroorays.
Hadaba Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo si diiran loogu soo dhaweeyay xaflada dabaaldaga degmada cusub ayaa khudbad muhiim ah oo taabanaysa dhinacyo badan kajeediyay goobtaas isagoo ugu horayn shacabka deegaanka guud ahaan ugu hanbalyeey degmooyinka, Maamul-magaalooyinka iyo gobolada cusub ee u soo kordhay deegaanka gaar ahaana shacabka degmada waqooyiga jigjiga ee Haroorays. Madaxwaynaha ayaa shacabka degmada u tilmaamay sidii ay degmada cusub u maal-gashan lahaayeen, nabadgalyadeedana u ilaashan lahaayeen iyo waliba maadaama oo ay haroorays ku caan tahay dhanka beeraha in shacabka degmadu uu xooga saaro dhanka maalgashiga waxsoosaarka beeraha.
Sidoo kale, madaxwaynaha DDSI ayaa xusay dadaalada ay ku yimaadeen ansixint degmooyinkan, maamul magaalooyinkan iyo waliba goboladan cusub oo ahayd mid ay XSHDSI iyo xukuumada DDSI ay udub dhaxaad u yihiin iyo mid kutimid ciidamada difaaca qaranka, ciidanka gaarka ah ee DDSI, ciidanka federal-boliska ah iyo waliba shacabka deegaanka oo la’aantii aan waxba suurtagalin oo dhamaantood naftooda, maalkooda iyo maskaxdoodaba uhuray sal-udhigii nabadgelyada deegaanka. Waxaa intaa dheer oo uu madaxwaynuhu kubooriyay shacabwaynaha deegaanka in ladagaalanka ururada argagixisada ah hal dhinac looga soo wada jeedsado.
Dhanka kale waxaa xaflada dabaaldaga kahadlay suldaamo,ugaasyo iyo cuqaal iyadoo kooxaha fanka iyo suugaantuna ay soo bandhigeen heeso iyo dhaantooyin katurjumaya taariikhda degmada cusub ee haroorays.
Si kastaba ha ahaatee, madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa dhagax dhigay dugsi sare oo loo dhisayo degmada.
Ugudanbayna, waxaa xaflada lagu soo xidhay qado sharaf loo sameeyay dhamaan ka qaybgalayaasha xafladii lagu maamusayay degmada cusub.